Ithegi: nra | Martech Zone
Iimpembelelo zeTekhnoloji apho sitya khona
Lwesine, Okthobha 10, 2013 Lwesine, Okthobha 10, 2013 Douglas Karr
Sabelane ngeposi kwi-FlockTag, inkqubo yokunyaniseka kunye nomvuzo kwiivenkile zekofu kunye neeresityu ezinceda ukuqhuba ukugcinwa kwabathengi. Uku-odola kwi-Intanethi, ukubhukisha kwi-intanethi, uphononongo lwe-Intanethi, imithombo yeendaba zentlalo, iikhuphoni zedijithali, ukukhangela kwasekhaya… itekhnoloji inefuthe elikhulu kwindlela esifumana ngayo nakwiindawo esihlala sitya kuzo. Ngapha koko, uMbutho weSizwe wokutyela uxela ukuba iipesenti ezingama-45 zabathengi sele bekhethile ukuba batye phi besebenzisa isixhobo esikwi-intanethi. Kwaye iipesenti ezingama-57 zabaxhasi zisebenzisa i-intanethi
I-NRA Tech Pavilion yango-2008 iqaqanjiswe neeDigital Displays
NgoLwesithathu, Meyi 21, 2008 NgoLwesihlanu, Novemba 17, 2017 Douglas Karr
Lo ibingunyaka wam wokuqala kwiNkomfa yeNRA. Ngaphandle kokuzilolonga ngakumbi kunam, ngokuhamba, umboniso wawungeyiyo itekhnoloji enkulu. Mhlawumbi itekhnoloji ebanda kakhulu apho (ngaphandle kwePatronpath) yayiyimiboniso yedijithali, eyaziwa njengeempawu zedijithali. Imiboniso yeDijithali yimiboniso emikhulu ye-HDTV ebonisa imithombo yeendaba epheleleyo (ividiyo kunye nemizobo) kwaye unokuhlengahlengisa umyalezo njengoko kufuneka. Kwishishini lokutya, kukho izinto ezithile ezipholileyo- ezinje ngokudibanisa ngqo